UNGAWALUNGISA KANJANI AMACHWEBA E-USB ANGASEBENZI KU WINDOWS 10 I-LAPTOP / PC - AMANANI
Ungawalungisa kanjani amachweba e-USB angasebenzi ku Windows 10 I-Laptop / PC
Uke waqaphela Imbobo ye-USB iyeke ukusebenza ngemuva kokukhipha noma ukufaka idivayisi ye-USB, Noma Amadivayisi e-USB awasebenzi ngemuva Windows 10 isibuyekezo se-1903? Kuleso simo, ngeke ukwazi ukusebenzisa amadivayisi wakho we-USB ikhibhodi yangaphandle, igundane le-USB, iphrinta, noma umshayeli wepeni. Yebo, kukhona amathuba amachweba e-USB angasebenzi kahle, kepha hhayi wonke Njengoba yonke ikhompyutha inezindawo eziningi ze-USB. Ngakho-ke lokho kusho ukuthi inkinga ihlobene nabashayeli noma idivayisi ye-USB uqobo. Lapha sinokusebenza okulula ukulungisa imbobo ye-USB engasebenzi kumawindows laptops ayi-10 namakhompyutha wedeskithophu.
Okuqukethwe umbukiso 1 I-Laptop USB Port Ayisebenzi 1.1 Hlola iMenenja yedivayisi ukuthi ithole idivayisi ye-USB 1.2 Khubaza futhi unike amandla kabusha isilawuli se-USB 1.3 Ukuhlola izilungiselelo zokuphathwa kwamandla 1.4 Vala i-Fast Boot 1.5 Ibuyekeza Amashayeli Wedivayisi ye-USB
I-Laptop USB Port Ayisebenzi
Kwesinye isikhathi ukuqala kabusha okulula kungalungisa inkinga enkulu ngeWindows PC yakho. Uma kungokokuqala ngqa ukuthi ubone ukuthi amadivayisi we-USB awakusebenzeli uqala kabusha amawindi bese uhlola.
Uma ungumsebenzisi we-laptop, Nqamula i-adaptha yamandla, Susa ibhethri kwi-laptop yakho. Manje bamba inkinobho yamandla amasekhondi ayi-15-20 bese uphinde ufake ibhethri bese uxhuma ugesi. Amandla ku-laptop bese uhlola ukuthi amachweba e-USB asebenza kahle yini.
Nqamula amadivayisi anezinkinga bese uyixhuma kabusha, noma xhuma ethekwini ehlukile kwi-PC yakho noma kwi-laptop.
Futhi kunconyiwe, xhuma idivayisi ye-USB nekhompyutha ehlukile ukuze uhlole futhi uqiniseke ukuthi idivayisi uqobo ayilona iphutha.
Hlola iMenenja yedivayisi ukuthi ithole idivayisi ye-USB
Cindezela iWindows + R, thayipha amadivayisi.msc bese uqhafaza kulungile,
Lokhu kuzovula umphathi wedivayisi yeWindows futhi kubonise lonke uhlu lwabashayeli olufakiwe,
Chofoza Isenzo , bese uqhafaza Skena izinguquko zehadiwe .
Ngemuva kokuthi ikhompyutha yakho iskene nezinguquko zehadiwe, ingahle ibone idivayisi ye-USB exhunywe ethekwini le-USB ukuze ukwazi ukuyisebenzisa.
Khubaza futhi unike amandla kabusha isilawuli se-USB
Futhi, khubaza futhi unike amandla kabusha zonke izilawuli ze-USB kusuka kuMphathi wedivayisi, ezivumela abalawuli ukuthi baphinde bathole imbobo ye-USB esimweni sayo sokungaphenduli.
Phinda uvule umphathi wedivayisi usebenzisa i-devmgmt.msc,
Nweba Abalawuli be-Universal Serial Bus .
Qhafaza kwesokudla isilawuli sokuqala se-USB ngaphansi Abalawuli be-Universal Serial Bus , bese uqhafaza Khipha ukuyisusa.
Yenza okufanayo ngesilawuli se-USB ngasinye esibhalwe ngezansi Abalawuli be-Universal Serial Bus .
Qala kabusha ikhompyutha. Ngemuva kokuthi ikhompyutha iqale, iWindows izoskena ngokuzenzakalela izinguquko zehadiwe iphinde ifake zonke izilawuli ze-USB ozikhiphile.
Hlola idivayisi ye-USB ukuze ubone ukuthi iyasebenza yini.
Ukuhlola izilungiselelo zokuphathwa kwamandla
Kukhibhodi yakho, cindezela iWindows Key + X, khetha umphathi wedivayisi,
Bheka Izilawuli Zamabhasi Ase-Serial Serial, bese unweba okuqukethwe kwayo.
Ohlwini, chofoza kabili idivayisi yokuqala ye-USB Root Hub bese uya kuthebhu Yokuphatha Amandla.
Susa ukukhetha inketho ethi ‘Vumela ikhompyutha ukuthi icime le divayisi yokonga amandla’.
Qhafaza KULUNGILE ukugcina izinguquko.
Uma kunamadivayisi amaningi we-USB Root Hub ngaphansi kohlu lwe-Universal Serial Bus Controllers, kuzofanela uphinde izinyathelo zalo lonke ucingo.
Vala i-Fast Boot
Kubasebenzisi abaningi, inkinga ixazululwa ngemuva kokuvala inketho yokuqalisa ngokushesha ku-Windows yakho. Lokhu ikakhulukazi kungenxa yebhuthi esheshayo, kahle, ibhuthi uhlelo lwakho lushesha kakhulu olunganiki amadivayisi wakho isikhathi esanele sokufaka kahle.
Cindezela iWindows + R, thayipha amandla. cpl bese uchofoza ok
Khetha Khetha ukuthi izinkinobho zamandla zenzani
khetha Shintsha izilungiselelo ezingatholakali okwamanje
Susa ukumaka ebhokisini elithi Vula ukuqala okusheshayo (kunconyiwe).
Chofoza Londoloza izilungiselelo
Ibuyekeza Amashayeli Wedivayisi ye-USB
Kungenzeka ukuthi usuphelelwe yisikhathi, ulahlekile, noma ulimele kubashayeli kukhompyutha yakho. Ngakho-ke, uma uzame izixazululo zangaphambilini kepha inkinga iyaqhubeka, siphakamisa ukuthi uvuselele abashayeli bakho.
Vula umphathi wedivayisi usebenzisa i- ngobe.msc ,
Nweba “izilawuli ze-Universal SerialBUS”
Thola ukuthi ngabe ikhona yini idivayisi efakwe kuhlu lapho enophawu lwesibabazo esiphuzi.
Qhafaza kwesokudla kuyo bese ukhetha “Buyekeza i-Software Yesishayeli…”
Khetha 'Sesha ngokuzenzakalela ukuze uthole isoftware yokushayela ebuyekeziwe'.
Uma kungekho ukuvuselelwa okusha, chofoza kwesokudla bese ukhetha Khipha> KULUNGILE.
Iya kuthebhu yesenzo kuwindi leMenenja yedivayisi
Khetha okuthi Scan ngezinguquko zehadiwe, kuzovela imbobo ye-USB.
Manje xhuma kabusha amadivayisi akho aphathekayo ku-PC yakho futhi lapho amadivayisi wakho we-USB noma ikhadi le-SD njll azovela kwi-PC yakho manje.
Uma uzame izixazululo ezingenhla futhi ungakakwazi ukulungisa inkinga, kungenzeka ukuthi amachweba akho e-USB asevele onakele. Kulokhu, udinga ukuletha ikhompiyutha yakho kubuchwepheshe obuchwepheshe bese ubacela ukuthi bahlole.
Lapha usizo lwevidiyo olusizayo uku lungisa i-Dead USB port ku Windows 10 , 8.1 no-7.
Ungazilungisa Kanjani Izinkinga Zomshayeli Wedivayisi Ku Windows 10
Kuxazululwe: Windows 10 Ukusetshenziswa kwediski okungu-100 ngemuva kuka-Meyi 2019 V1903
Landa futhi Uhlanze Ukufaka Windows 10 Kwangathi i-2019 inguqulo Yokuvuselela i-1903
I-VPN ivimba i-Intanethi kumawindi 10? Nazi izixazululo ezi-7 ongazisebenzisa
kungani i-adapter yami ye-wifi iqhubeka nokunqamula
kukhona okungahambi kahle nge-proxy server, noma ikheli alilungile.
kwenzeke iphutha elingaziwa (0xe80000a)
ungangeza kanjani isithonjana sekhompyutha yami kudeskithophu kumawindi 10
ayikwazi ukushintsha ukulungiswa kwesikrini windows 10
idiski ukubhala ukubhala usb windows 10